नेपालमा थप १६७४ जनामा कोरोना संक्रमण, कुन जिल्लामा कति भेटिए ? - Vishwanews.com
नेपालमा थप १६७४ जनामा कोरोना संक्रमण, कुन जिल्लामा कति भेटिए ?
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १६७४ जना कोरोना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा ८ हजार १४४ नमुना परीक्षण गर्दा १६७४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
यससँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख १८ हजार ६३९ पुगेको छ ।
गत २४ घण्टामा २३२३३ जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको १ लाख ९३ हजार ३२५ जना रहेको छ ।
गत २४ घण्टामा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म मृत्यु हुने १३०५ जना छन् ।